Thailand's finance minister: Urhulumente uza ukuvala urhwebo cryptocurrency - Blockchain News
wezeziMali ZaseThailand: Urhulumente uza ukuvala urhwebo cryptocurrency
Urhulumente Thai akayi ban urhwebo cryptocurrency, lithi uMphathiswa wezeMali Apisak Tantivorawong, kodwa sikhokelo regulatory ukulawula nemali lwamasuntswana kwenziwa kwacaca ngakumbi phakathi ngenyanga.
Emva kwengxoxo yakutshanje, arhente ezinxulumene kwavunyelwana ukuba nabalawuli akakwazi ukuyeka ukusetyenziswa nemali virtual kodwa kuya kufuneka lokulawula kubo ngendlela efanelekileyo, Mr Apisak uthe izolo xa “Thai isuka 2018” seminar esingethwe yi Post Namhlanje.
Yibhanki eyongameleyo, sec, Ministry Finance and Anti-Money lokuxhaphaza Office (Amlo) bavumile ukuba kumiswe kwiphaneli ukusebenza uxanduva siqwalasele izinto ezinokuba lokulawula ezimalini digital.
Umthombo kwi-Ofisi yoMphathiswa wezeMali kungekudala lenjongo ukusebenza kuwuncamela isakhelo olawulo zemali digital.
Ulawulo cryptocurrencies kudala ubunzima ngenxa yokuba kungekho kuvumelana ikhona kwi best neendlela zolawulo, lo mthombo.
West Virginia ilinga blockchain app yokuvota ukhetho wamadoda
West Virginia is Tri ...
Post Previous:izazinzulu zenyukliya Russian wabanjwa ngenxa ngokusebenzisa computer ukuba cryptocurrency sam
Post Next:abatyali-Japanese crypto kumelana phezulu ku 55% tax enzuzweni